ဒစ်မီးတာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒစ်မီးတာ (အင်္ဂလိပ်: Demeter; အေသင်ဂရိ : Δημήτηρ Dēmḗtēr /ဒိမီးတီ/; ဒေါရစ်ဂရိ : Δαμάτηρ Dāmā́tēr) သည် ရှေးခေတ်ဂရိဘာသာတရားနှင့် ဂရိဒဏ္ဍာရီမှ အိုလံပတ်တောင်၏ နတ်ဘုရားမတစ်ပါးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေ၏ သီးနှံမျိုးအောင်ခြင်း၊ မျိုးစေ့များအပေါ် စောင့်ရှောက်သောသူဖြစ်၍ အထွက်နှုန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော နတ်ဘုရားမဖြစ်သည်။ သူမ၏ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဂုဏ်ပုဒ်များတွင် ဆီတို (Σιτώ) ဖြစ်၍ အစားအသောက်၊ မျိုးစေ့များပေးသောကြောင့် 'မျိုးစေ့တို့၏ အရှင်'ဖြစ်ကာ အခြားတစ်ခုမှာ သီစ်မော့စ်ဖောရော့စ် (θεσμός φόρος) ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုရှိသော စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ အမှတ်သညာအဖြစ် 'ဥပဒေ ဆောင်ကျဉ်းလာသူ' လည်းဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံရိတ်သိမ်းခြင်း၊ မျိုးအောင်ခြင်းနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေသဆိုင်ရာ နတ်ဘုရားမ
ရောမအမျိုးသား ပြတိုက်မှ ဒစ်မီးတာ၏ စကျင်ကျောက်ရုပ်တု
သီးနှံ့ပေါများခြင်း ဆိတ်ဦးချိုသင်္ကေတ၊ ဂျုံ၊ မီးရှူးမီးတုတ်၊ ပေါင်မုန့်
သီစ်မော့စ်ဖောရီးယား ဘာသာရေးပွဲ၊ အီလက်စင်းနီးယာ ပူဇော်ပသမှုပွဲ
ခရိုးနပ်စ် and ရီးယာ
ဟက်စတီးယာ၊ ဟဲ့ရာ၊ ဟေးဒီးစ်၊ ပိုဆိုက်ဒန်, ဇုစ်, ခိုင်ရန်
အိုင်ယေးရှန်၊ ဇုစ်၊ ပိုဆိုက်ဒန်
ပါဆက်ဖန်နီ, ဒိုင်ယာနိုက်ဆပ်စ်၊ ဒဲ့စပီနာ၊ အရိုင်းယန်၊ ပလူးတပ်စ်၊ ဖစ်လာမီးလပ်စ်
ဒစ်မီးတာကို များသောအားဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးရာ အထွက်နှုန်း နတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသော်လည်း ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများနှင့် ဘဝနှင့် သေခြင်း သံသရာ တို့အပေါ်တွင်လည်း စိုးမိုးသည်ဟု သတ်မှတ်ကြ၏ ။ သူမနှင့် သမီးဖြစ်သူ ပါဆက်ဖန်နီ တို့သည် အိုလံပီယာနတ်ဘုရားများ ကိုးကွယ်ခြင်းထက် ပို၍စောသည့် ဘာသာရေး ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်သော အီလက်စင်းနီးယာ ပူဇော်ပသမှုများ၏ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်သည်။ ယင်းဓလေ့သည် မိုက်ဆီးနီးယန် ခေတ် (ဘီစီ ၁၄၀၀-၁၂၀၀) မှ စတင်ခြေရှိနိုင်သည်။ ဒစ်မီတားကို ပုံမှန်အားဖြင့် အနာတိုလီယားဒေသ၏ နတ်ဘုရားမ 'ဆစ်ဘစ်လီ' ဟု ယူဆကြသကဲ့သို့ ရောမနတ်ဘုရားမ 'ဆစ်ယာရီးဇ်' အဖြစ်လည်း ဖော်ပြကြသည်။
↑ "Amaterasu and Demeter: AboutaJapanese – Greek Mythological Analogy" (1993). International Journal of Musicology 2: 9–21.
↑ တမ်းပလိတ်:LSJ. Cf. တမ်းပလိတ်:LSJ.
↑ Themis was an ancient Greek goddess, embodiment of divine order, law. She was the organizer of the communal affairs and she evoked the social order: Finley, The World of Odysseus, rev. ed. Viking Press. (1978:78 note 82)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒစ်မီးတာ&oldid=540201" မှ ရယူရန်
၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၇:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၇:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။